Iindawo Zeholide Eziqeshisayo eGauteng - eMzantsi Afrika | Airbnb
Iindawo zeholide eziqeshisayo eGauteng
Ezona zindlu eziqeshisayo zeholide ezithandwayo eGauteng
I-Northcliff Self Catering Cottage kunye neJacuzzi
Zive uphezulu esibhakabhakeni kunye nale ndlu yasemaphandleni ephindwe kabini eNorthcliff. Le cottage self catering ngokukhululekileyo ilala 2 abantu kunye lokulala yangasese en-suite. 1st floor - Nandipha ukufikelela simahla fibre engaphiliyo Wi-Fi, Netflix, Showmax & DStv (ngokupheleleyo). I-Balcony enomgangatho weplanga, i-Jacuzzi yabucala, ikhitshi elinesitovu segesi kunye ne-hob, isitya sokuhlamba izitya, i-aircon, indlu yangasese yondwendwe kunye ne-TV ehlakaniphile. Umgangatho wesibini - Igumbi lokulala (1) Ibhedi ehamba phambili, igumbi lokuhlambela eliphakathi (ishawa kunye nebhafu), i-TV (Netflix, Showmax & DStv (epheleleyo) kunye ne-aircon.
Izinto ezinokusetyenziswa ezithandwayo kwiindawo eziqeshisayo zeholide eGauteng
Ezinye iindawo zeholide eziqeshisayo eGauteng
Indlu Eyakhiwe Emthini emangalisayo engena kwindalo kufuphi nesixeko
Upendo Peace Guesthouse
★ 1 BR kunye nejimu eseyadini — isembindini ★